China 430 eshushu liqengqiwe insimbi coil Ukwenziwa kunye mveliso | IHuaxiao
I-430 yintsimbi engenasici ye-ferritic, i-430 16Cr luhlobo olumelekileyo lwensimbi ye-ferritic, ireyithi yokwanda kwe-thermal, ukumiliselwa okuhle kunye nokumelana ne-oxidation. Izixhobo ezingafudumezi ubushushu, izitofu, izixhobo zasendlini, uhlobo lwesibini lwezinto zokucheba, izitya zekhitshi, izinto zokuhombisa zangaphandle, iibholiti, amandongomane, iintonga zeCD, izikrini. Ngenxa yomxholo wayo we-chromium, ikwabizwa ngokuba yi-18/18 okanye ngo-18-0. Xa kuthelekiswa ne-18/8 kunye ne-18/10, umxholo we-chromium uphantsi kancinci kwaye ubunzima buyancitshiswa ngokufanelekileyo.
Sino Stainless Capacity malunga 430 Kushushu uqengqele coil insimbi , 430 HRC
Ubukhulu: 1.2mm - 10mm
Ububanzi: I-600mm-2000mm, iimveliso ezixineneyo ze-pls jonga kwiimveliso zomtya
Ubunzima bekhoyili enkulu: 40MT
Isazisi seCoil: 508mm, 610mm
Gqiba: I-NO.1, 1D, 2D, # 1, ishushu egqityiweyo egqityiweyo, emnyama, i-Anneal kunye ne-pickling, ukugqiba kokugaya
430 Ibanga elinye ukusuka kumgangatho welizwe ohlukileyo
430 Icandelo leKhemikhali i-ASTM A240:
C: ≤0.12, Si: ≤1.0 Mnu: ≤1.0, Cr: 16.0～18.0, Ni: <0.75, S: .00.03, P: .0.04 N0.0
Ipropathi ye-430 ye-ASTM A240:
Uqine:> 450 MPA
Ukudibanisa (%):> 22%
Ukuncitshiswa koMmandla ψ (%): ≥50
Ubunzima: 7.7g / cm3
Indawo yokunyibilika: 1427 ° C
Isicelo malunga ne-430 yentsimbi engenasici
I-1, i-430 insimbi engenasici isetyenziselwa ukwakha umhombiso, izinto ezitshisa ipetroli, izixhobo zekhaya, izixhobo zombane zasekhaya.
2.Yongeza i-430F yentsimbi ngentsebenzo yokusika simahla kwi-430 yentsimbi, esetyenziselwa ikakhulu ii-lathes ezizenzekelayo, iibholiti kunye neenati.
3.Ukuba sidibanisa iTi okanye iNb kwi-430 yentsimbi engenacici, ukunciphisa i-C, unokufumana ibanga le-430LX, ukusebenza kunye nokusebenza kwe-welding kungaphuculwa, ikakhulu kusetyenziselwa iitanki zamanzi ashushu, iinkqubo zokuhambisa amanzi ashushu, izixhobo zangasese, ezomeleleyo ekhaya izixhobo, iiflaya, njl.
Thelekisa ngokulula malunga ne-304 kunye ne-430
I-304 ine-nickel equkethe i-austenitic insimbi engenasici, kwaye ukusebenza kwayo ngokubanzi kusetyenziswa ngokubanzi. Ngenxa yomxholo wenickel, ixabiso layo alikho sezantsi. I-430 yintsimbi ephezulu ene-chromium ferritic kwaye ayinayo i-nickel. Ekuqaleni yaphuhliswa kwaye yaphakanyiswa yiJFE yentsimbi yeJapan. Ngenxa yokuba ingenayo i-nickel, ixabiso alichaphazelekanga kukuhla kwamaxabiso e-nickel. Ixabiso liphantsi, kodwa ngenxa yomxholo wayo ophezulu we-chromium, iyamelana nokubola. Ukusebenza okugqwesileyo, ukhuseleko lokutya alubuthathaka kunama-304. Ngenxa yexabiso layo eliphantsi kunye nokusebenza okufuphi-kwama-304, kungoku nje ikwisikhundla esingama-304 kwizicelo ezininzi.
Egqithileyo Iikhoyili zentsimbi ezingama-410 410 ezishushu nezishushu
Okulandelayo: NO.4 coil yesinyithi
301 Stainless Ikhoyili
Abavelisi beCoil ezingenasici
Amaxabiso e-Coil ye-Stainless